Lalao Ravalomanana:TSY TO TENY AMIN’NY MPIVAROTRA -
AccueilRaharaham-pirenenaLalao Ravalomanana:TSY TO TENY AMIN’NY MPIVAROTRA
21/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Androany no daty voatondron’ny avy ao amin’ny kaominina fa hanombohana ny tsenan’ny noely isaka ny boriborintany. Araka ilay fanapahana navoaka ihany koa dia tsy azo hivarotana eny Analakely mandritra izao volana Desambra izao, fa efa nalefa eny amin’ny boriborintany misy azy ireo mpivarotra. Ny mifanohitra amin’izay anefa no zava-nitranga hatramin’ny androany. Efa hatramin’ny fiandohan’ny volana Desambra no feno mpivarotra ireo kojakoja ilaina amin’ny fiatrehana ny fetin’ny Noely teny Analakely. Efa tonga hatramin’ny fanapahana ny lalana mihitsy aza izany ankehitriny. omaly ohatra dia efa tsy azon’ny fiara naleha intsony teo amin’ny arabe manoloana ny Lycée Rabearivelo, fa ireo mpivarotra no nameno ny lalana. Tsy misy azo hatao fa dia miraviravy tanana ireo tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina manoloana izany. Afaka manao izay tiany atao araka izay maha mety azy araka izany ireo mpivarotra, ka samy nanangana ny tsenan’ny Noeliny amin’izay toerana tiany nananganany azy, sady eny amin’ny toerana voarara araka izany ireto mpivarotra.
Reraka ireo polisy
Niteraka resa-be teto an-drenivohitra ny fifanenjehana teo amin’ireo polisy monisipaly, sy ny mpivarotra teo Analakely nandritra ny volana Novambra, sy ny fiandohan’ny volana Desambra 2016. Nampiaiky ireo mpitazana ny fampiasan-kery nataon’ireto Polisy Monisipaly ireto nandritra izany. sendra ny be noho vitsy anefa izy ireo ka reraka ihany rehefa ela ny ela. Tsy nisy vokany araka izany ny fandaminana noeritreretin’ny Be’ny tanàna Lalao Ravalomanana natao ho fandaminana ny tanàna mandritra izao fanomanana ny fiatrehana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao. Tsy nanaraka ny tenin’ny Ben’ny tanàna ihany koa ireo mpiara-miasa aminy manoloana io fandaminana saika napetraka io. Mampanatanteraka asa tsy azo tanterahina mantsy ny ben’ny tanàna raha ny resaka nifanaovana tamin’ny sasany tamin’izy ireo. Tsy ho azon’ny saina eritreretina mihitsy mantsy ny hanafoana ireo mpivarotra eny Analakely, indrindra amin’ny vanim-potoana manakaiky fety toa izao raha ny nambaran’izy ireo. Tsy nahagaga araka izany raha toa ka tsy nisy nanaraka io baikon’ny ben’ny tanàna ho fandaminana ny tsenan’ny Noely io.